Manampahefana Serba manasazy fikambanana mpanao asa soa ara-pahasalamana noho ny nampisehoany ny tsy firaharahian’ny fanjakana · Global Voices teny Malagasy
Voadika ny 24 Oktobra 2018 15:00 GMT
Vakio amin'ny teny Español, Ελληνικά, русский, Italiano, English
Sergej Trifunović, mpanao asa soa hita ao amin'ny pejy voalohan'ny gazety mpivoaka isan-kerinandro Vreme tamin'ny 20 septambra 2018, manasongadina tafatafa milaza momba ny fanorisorenana ataon'ny fanjakana. Hoy ny lohateny: “Nahoana isika no tsy maintsy manao ny asan'izy ireo”. Saripikan'i GV, CC-BY.
Manao fanadihadiana fikambanana mpanao asa soa eo amin'ny sehatry ny fahasalamana ny manampahefana misahana ny fampiharana ny lalàna ao Serbia, mpitsikera ampahibemaso ny fitondrana ny tompon'ny fikambanana ka mahatonga ny olom-pirenena sasany hilaza fa valifaty no anton'ny fanadihadiana.
Nilatsaka ny famotoroana tao anatin'ny raharaha niparitaka be tamin'ny fampahalalam-baovao fa ny fikambanana, antsoina hoe Podrži život (“Fanohanana ny Fiainana) dia nanampy ankizy lahy, 4 taona, Dušan Todorović, mba hahazo fitsaboana homamiadana any Espaina.
Ny asan'ny fikambanana dia manangona fanomezana avy amin'ny olom-pirenena amin'ny alàlan'ny SMS mba hanampiana ireo ankizy mila fitsaboana ara-pahasalamana lafo be izay tsy mba omen'ny rafi-pahasalamam-bahoaka Serba. Tamin'ny volana Septambra, nahavita nanangona 191 000 euros (eo amin'ny 225 000 dolara amerikana) izy ireo mba handoavana ny fitsaboana zazalahy iray.
Rehefa nisarika ny sain'ny vahoaka sy ny fampahalalam-baovao ity volabe ity, dia nandefa ny angidimbiny ho any amin'ny tanàna kely, Svilajnac misy ilay ankizilahy ny governemanta mba hitondra azy any Belgrade, ary avy eo ny fiaramanidina ofisialiny hitondra azy indray any Barcelona.
Serba maro no nihevitra fa fihetsika feno fihatsaram-belatsihy izany ary nilaza fa nampiasaina fotsiny mba hanehoana ny filoha Serba Aleksandar Vucićn Preside ho mpamonjy ankizy. Namoy ny ainy tany Barcelone tapa-bolana taty aoriana ilay zazalahy.
Fotoana fohy taorian'ny namindrana ilay zazalahy tany Espaina, niseho fahitalavitra mba hampitandrina ny olom-pirenena amin'ny fanomezana vola amin'ny alalan'ny SMS ny Minisitry ny Fahasalamana Zlatibor Lončar – izay nohadihadian'ny fampahalalam-baovao mpanao fanadihadiana ao an-toerana vao haingana ny fifandraisany amin'ny mafia Serba. Hoy izy: “Mitandrema amin'ny hetsika SMS, azontsika antenaina ny hanambara ny halotoana ao”.
Niteraka ahiahy avy hatrany ny fanambarana fa ilay mpanao soa no tiana kendrena. Eny tokoa, tamin'ny 11 Oktobra, nisioka ilay mpanorina ny Life Support, Sergej Trifunović, izay mpilalao sarimihetsika malaza any Serbia ihany koa fa notsidihan'ny polisy ny orina mpanasoa.
Tonga ato aminay ny polisy misahana ny heloka bevava, sampan-draharaha misahana ny fikambanan-jiolahy! Olona tsara fanahy, tsy manan-kambara izy ireo, tsy maintsy manao ny asany izy ireo …
Raha nilaza mialoha momba ny fanaraha-maso tamin'ny tafatafa tamin'ny 20 septambra izy- rehefa nilaza fa matoky ny fomba fiasan'ny fikambanana amin'ny fanajana tanteraka ny lalàna – tsy nizara ny antsipiriany bebe kokoa momba ny fahatongavan'ny polisy tamin'ny 11 Oktobra i Trifunović.
Tantara mitovy ao Makedaonia?
Mitovitovy amin'ireo izay ampiasain'ny governemanta hafa mpandrendri-bahoaka any Eoropa Afovoany sy Atsinanana, indrindra ao Hongria sy Makedonia mpifanolo-bodirindrina ny fomba fanerena an'ireo fikambanana fiarahamonim-pirenena Serba.
Tantanin'ny Antoko Progresista Serba (SNS), avy amin'ny farany ankavanana i Serbia, saingy nahavita nampiseho ny tenany indray ho toy ny antoko mpomba ny Vondrona Eoropeana (EPP), ary lasa mpikambana ao amin'ny Antokom-bahoaka Transnasionaly, fikambanan'ireo antoko ara-politika afovoany-ankavanana. Talohan'ny nialàny teo amin'ny fahefana tany Makedonia tamin'ny volana mey 2017, dia nanomboka nanao famoretana an'ireo fikambanana sivily malaza teo an-toerana tamin'ny alalan'ny fanadihadiana maromaro ny “antoko rahavavin'ny” SNS tao amin'ny EPP, ny VMRO-DPMNE. Nampiasa ny polisy ara-bola, ny biraon'ny mpampanoa lalàna, ny minisiteran'ny atitany, ny fitantanana ny hetra sy ny vaomiera miady amin'ny kolikoly ny famoretana.
Taorian'ny fiovan'ny governemanta, nanamafy ny manampahefana Makedoniana misahana ny fampiharana ny lalàna fa nahazo baiko izy ireo mba hitady zavatra azo ampiasaina hanamelohana ireo fikambanana. Na dia saiky tsy nahita porofo manameloka aza izy ireo, niafara tamin'ny faharitran'ny fotoana sy ny fitaovan'ireo fikambanana ny fanadihadiana.
Tamin'ny 17 Oktobra, nisioka i Trifunović fa niatrika karazana famoretana toy izany ny Fikambanana Support Life (Fanohanana ny fiainana) ao Serbia:
Vao avy nandre tamin'ny “loharanom-baovao” aho fa nahazo baiko hitady ny fomba rehetra hanenjehana ahy izay mety hiafara amin'ny fanagadrana ahy ny biraon'ny mpampanoa lalàna. Tsy maninona na mahita na tsy mahita zavatra hanamelohana ny [fikambanana] izy ireo. Andeha hojerena ny fomba fiasan'ny tany tan-dalàna! Miasa mafy kokoa! Amin'ny fomba rehetra.
Tao amin'ny media sosialy, naneho ny fanohanan'izy ireo ny Support Life ny olona tamin'ny alalan'ny fandefasana sioka ny laharana findain'ny fikambanana 5757, mandrisika ny olona mba hanolotra fanomezana.
Tsy laharana mpanao asa soa ihany ny #5757.
Fa mariky ny fanoherana ny didy jadona.
Tsy valifaty amin'i Segej noho ny haja sy fitokisana azony ihany no anton'ny famotehana ny orina mpanasoa [Support Life] Manohana ny Fiainana, fa vokatry ny tahotry ny ratsy manoloana ny endrika fiarahamiasa izay mety hanambatra antsika sy hamoaka ny tsara ao amintsika koa.